Amanyathelo okuya eLwandle-Isitudiyo esiphangaleleyo
Igumbi elise- indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo sinombuki zindwendwe onguBen
Le renti luhambo lwemizuzu emi-5 ukuya elunxwemeni. Le yunithi sisitudiyo esikhulu. Ifanelekile ukubaleka kwezothando okanye ukubaleka okufikelelekayo ukusuka yonke imihla kunye negumbi elongezelelweyo lokukhaba umva kwaye uphumle. Le yunithi inebhedi yenkosi eyahlulahlulwe, isofa, 32" umabonakude wescreen esicaba, ikhitshi elinobungakanani obugcweleyo befriji kunye netop top, kunye nebhafu epheleleyo enebhafu.
Le yunithi iza neelinen zebhedi, iitawuli zokuhlambela, izinto zasekhitshini kunye neesepha zokuhlambela. Amagumbi ethu aqaqambisa umtsalane we "Old Florida" kunye nezinto eziluncedo zangoku ozilindeleyo. IiSuite zethu zegumbi elinye zinee-TV ezingama-32" zescreen esicaba, ubushushu, iA/C kunye ne-wi-fi yasimahla.
Asiboneleli ngenkonzo yokunciphisa yonke imihla.
Sinobubele kwizilwanyana zasekhaya. Samkela iikati nezinja eziziphethe kakuhle ngentlawulo eyongezelelweyo. Nceda uthumele umbuzo kwaye siyavuya ukuthumela isicatshulwa esipheleleyo ukuze uhlale nezilwanyana zakho zasekhaya.
Le renti luhambo lwemizuzu emi-5 ukuya elunxwemeni. Le yunithi sisitudiyo esikhulu. Ifanelekile ukubaleka kwezothando okanye ukubaleka okufikelelekayo ukusuka yonke imihla kunye negumbi elongezelelweyo lokukhaba umva kwaye uphumle. Le yunithi inebhedi yenkosi eyahlulahlulwe, isofa, 32" umabonakude wescreen esicaba, ikhitshi elinobungakanani obugcweleyo befriji kunye netop top, kunye nebhafu epheleleyo enebhafu…
4.65 (iingxelo zokuhlola 83)
Yiva ukutshona kwelanga eLido Beach njengoko ilanga litshona ngaphantsi kwegophe lamanzi kwaye uthobisana nabahlobo bakho, usapho kunye nabanye abahamba elwandle. Phumla elangeni kwingca yethu enengca okanye wonwabele impepho efudumeleyo yaseSarasota kwi-hammock yethu entle kakhulu enye, kodwa inkulu ngokwaneleyo ukuba zimbini. Zulazula ukuya eSt. Armans Circle ukuze ufumane iindawo zokutyela ezimnandi, iimpahla ezinesitayile kunye neevenkile ezizodwa.
Nokuba uhlala nje ubusuku obunye okanye ixesha elide, ii-suites zethu zinayo yonke into oyifunayo ukuze usebenzise ixesha lakho eSarasota.
Sinomphathi wepropathi kwisiza ngexesha lasemini ukukunceda, okanye ungasoloko undithumelela i-imeyile.